Ao anatin’ny famoretana ny fihetsiketseham-panoherana governemanta, manome voninahitra ireo nodimandry ny Nikaragoana · Global Voices teny Malagasy
Naaton'ny governemanta ny fifampiraharahana ka niteraka fihetsiketseham-panoherana andiany faharoa
Voadika ny 30 Mey 2018 6:57 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Deutsch, Ελληνικά, English
Namoizana olona farafahakeliny 76 ny fihetsiketseham-panoherana lasa nivadika ho krizy politika ao Nikaragoà nanomboka tamin'ny faran'ny volana avrily 2018. Tamin'ny 24 mey, niato ny fifampiraharahana teo amin'ny governemanta sy ny mpanohitra izay natao tamin'ny endrika “Dinika Nasionaly”, ka niteraka andiam-pihetsiketsehana andiany faharoa.
Nandritra ny fihetsiketsehana tamin'ny volana avrily, notaterin'ny Vaomiera Iraisan'ny Amerikana Misahana ny Zon'Olombelona (CIDH amin'ny teny espaniola) ny fisian'ny fisamborana tsy ara-dalàna, fampijaliana, ary fanalam-baràka sy ny mety ho fisian'ny famonoana ivelan'ny fitsarana.
Nomelohin'ny CIDH ny famonoana ireo tanora mpianatra, noho ny tanora nandrafitra be indrindra ny isan'ny mpanao fihetsiketsehana tamin'ny Avrily. Notaterina am-baovao ny famonoana mpanao gazety iray ho fanampin'ny fanafihana Distributed Denial-of-Service (DDoS) amin'ny aterineto sy ny fandraràna ny fampitam-baovao.
Notapahin'ny governemanta ny dinika noho ny filazan-dry zareo fa ny fikasan'ny mpanohitra dia ny “hanokatra ny lalana” mankany amin'ny coup d'état [teny frantsay ao amin'ny lahatsoratra ôrizinaly]. Hatramin'ny 24 Mey, manahy hisian'ny andiam-pamoretana vaovao indray ny Nikaragoana ka niverina eny an-dalambe, ary dia nidina toy izany ihany koa ny polisy sy ny hery mitam-piadiana.
Hatramin'ny nanombohan'ny andiam-panoherana vaovao ity, farafahakeliny olona valo hafa no maty ary nisy namoaka an-tserasera ny heverina ho fanafihana avy amin'ny vondrona mitam-piadiana, tahaka izay notaterin'i Erika Guevara, talen'ny Amnesty International Americas:
Notarihan'ny tenirohy #SOSNicaragua ao amin'ny Twitter, mandeha any ambadimbadika any ny resadresaka hanao fitokonana faobe, ahitana ireo mpikatroka mizara nahandro manokana antserasera mba hampatanjaka tsara mandritra ny tontolo andro hanaovana fihetsiketseham-panoherana. Mifampizara ny ampirisihana atao hananana fifandraisana voaaro ny mpiserasera, na dia tsy misy aza ny serasera aterineto.
Mitaky amin'ny mpanao fihetsiketsehana ny governemanta hamarana ny fihetsiketsehana ary hanaisotra ireo sakana napetraka hametra ny fivezivezen'ny olona sy ny fiara manavatsava ny lalana manerana ny firenena. Mamaly fitakiana hampitsaharana ny famoretana ny mpanao fihetsiketsehana, ny fandravana ireo vondrona milisy ary ny fifidianana mialoha ny fotoana mba hisafidianana manampahefana vaovao.
Raha nahita ny fivoaran-draharaha tamin'ny volana avrily, manahy ny mpanao fihetsiketsehana sy ireo mpiasan'ny zon'olombelona fa hihamafy ny herisetra satria maro ireo mino fa ny lalan-tokana hialana amin'ny krizy dia ny fanovana governemanta. Misy ireo lahatsary maromaro mivezivezy an-tserasera ahitana Nikaragoana manaisotra ny “Hazon'ny Fiainana” an'ny Vadin'ny Filoha sady Filoha Lefitra Rosario Murillo napetraka tamin'ny taona 2013. Jeren'ny mpitsikera ho fanehoana ny fahefana tsirefesimandidy ny “hazo” metalika an'i Murillo, ary soloin'ny mpikatroka mpanohana ny fanovana ho hazo tena izy ireo “hazo” ireo ao anatin'ny fihetsika saimbolika:
Manome toerana isaonana ny fanomezam-boninahitra Youtube sy ny fijoroana vavolombelona Facebook, ka tafiditra amin'izany ny kaontin'ireo renin'ny mpianatra efatra maty tamin'ny Avrily. Ny hafa indray mifanakalo hevitra amin'ny anjara toeran'ny vehivavy nandritra ny fihetsiketsehana sy ny Dinika Nasionaly ary ny eritreritra amin'ny dikan'ny fihetsiketseham-panoherana hoan'ny maro:
Mijery eny an'arabe amin'alahelo ny olona, mahafantatra fa herinandro izay ny mpianatra nitolona mafy tamin'io toerana io ka notondrahana baomba mandatsa-dranomaso, ary ny tena ratsy amin'ny tranga sasany, novonoina na nogadraina (sy nampijaliana). Misy ny henatra tamin'ny tsy fanaovana na inona na inona […] Misy vehivavy zokiolona tsy mitsahatra ny miteny tamin'izany nitranga. Miezaka miteny amin'ny olona [izany nitranga] izy ary mampitaha izany tamin'izay nataon-dry Somoza [fianakaviana nitana ny fahefana tamin'ny alalan'ny jadona tao Nikaragoà nanomboka taona 1936 ka hatramin'ny taona 1979]. “Ratsy kokoa ity iray ity. Ity iray ity mahalala ny fahombiazan'ny fanaovana didijadona” […] Raha misy ny zavatra tokony hazava tsara, dia tsy ho toy ny teo aloha intsony ny tanora. Tsy hijery ireo toerana nisian'ny famonoana faobe amin'ny fomba mitovy izahay.